सत्ता गठबन्धन बैठक : प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको नाम मागेपछि साँझ पुनः बस्ने गरी स्थगित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मानसिक स्वास्थ्यबारे कति कुरा गर्ने चाहँदैनन् : कलाकार सुदाम सिके
भाद्र २५, २०७८ रीना मोक्तान, तस्बिर : बिजु महर्जन
काठमाडौँ — 'म तल गएँ, भान्सामा । चिकेन स्यान्डवीच बनाएर खाएँ । चिकेन स्यान्डवीच तर, चिकेनबिनाको । टिभीको अगाडि गएर बसें, अनि 'लिस्ट' कन्टिन्यु गर्न थालें । अनि मलाई के लाग्यो, त्यतिखेर लिस्ट मैले कुनै प्राथमिकताको आधारमा लेख्नुहुँदैन । किनभने हामीले कसरी थाहा पाउने मोमोभन्दा मुमिन बेटर हो'? छेउका मानिसहरुलाई प्रश्न गर्दै उनी लिस्ट बनाउन थाले ।
२३ – मुमिन
२४ – मोमो
२५ – स्कूलको त्यो अन्तिम घण्टी
२६ – स्वीमिङ पुलमा कसैले थाहा नपाउने गरेर सू गर्नु
केही दिनअघि टेकुस्थित कथा घेरा (कौसी थिएटर) पुग्दा उनी यस्तै केही कुराहरुको सूची तयार पार्नमा व्यस्त देखिन्थे । उनलाई घेरेर बसेका थिए केही मानिस । लिस्ट सुन्न चनाखो देखिन्थे उनीहरु । मञ्चमा एक्लै उभिएका उनी भने लिस्ट बनाउनमै मस्त । उनी कहिले मानिसहरुलाई स्टेजमा आउन निम्तो दिन्थे त कहिले आफैं दर्शकदीर्घामा बस्न जान्थे । नाटक 'हरेक बबाल कुरा'को रिहर्सलको दृश्य हो यो । लिस्ट तयार पार्ने पात्र हुन् कलाकार सुदाम सिके ।
भदौ २५ देखि मञ्चन हुने 'हरेक बबाल कुरा'मा उनी सोलो अभिनय गर्दैछन् । डंकन म्याकमिलनको 'एभ्री ब्रिलियन्ट थिंग'को नेपाली रुपान्तरण नाटक 'हरेक बबाल कुरा'मा उनी यस्तो पात्रको अभिनय गर्दैछन् जो बाँच्ने कारण नै नदेख्ने आफ्नी आमालाई जीवन बाँच्न लायक बनाउने हरेक बबाल कुराको लिस्ट तयार पार्छन् । उक्त लिस्टसँग जोडिएका स्मृतिहरुको माध्यमबाट उनले आफ्नो विगतका अनेकौं अध्याय पल्टाउँदै जान्छन् । लिस्ट तन्किँदै र उमेर ढल्किँदै जाँदा उनले आफ्नो जीवनप्रतिको बदलिएको दृष्टिकोण पहिल्याउँछन् ।
'हरेक बबाल कुरा'ले 'फोर्थ वाल ब्रेक' गर्दै मानसिक स्वास्थ्य र डिप्रेसनलाई मुख्य कथा बनाएको छ । महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्यप्रति मानिसहरुको चासो बढेको छ । कति यसबारे अनभिज्ञ छन् । मानसिक स्वास्थ्यबारे कति त कुरा गर्नै चाहँदैनन् । कोभिडले मानिसहरु आशा विहिन भए । कोभिडकै कारण कति एकान्तवासमा छन् । यो अवस्थामा नाटक 'हरेक बबाल कुरा' सापेक्षित हुनसक्ने भएर कौसीले डंकनको नाटक छनोट गरेको बताएको छ ।
कोरोना महामारीअघि यो टिम 'एनिमल फार्म' नाटकको तयारीमा थियो । तर कोभिड महामारीका कारण लकडाउन भयो । आकांक्षाले नाटकको काम स्थगित गरिन् । यसबीच कौसीले भर्चुअल माध्यमबाट 'प्ले ब्याक थिएटर' गर्‍यो । झन्डै एक वर्ष नाटकघर बन्द भएपछि आर्थिक पाटोलाई असर पर्ने नै भयो । 'एनिमल फार्म'मा १३ जना कलाकार थिए । कोभिडपछि उनको टिमले एनिमल फार्म गर्ने नसोचेका होइन । तर, ठूलो टिमलाई खर्च बढी लाग्ने भएपछि त्यसलाई आँट्न सकिनन् उनले ।
यो नाटक बनाउन भने तीनजनाको भेट नै काफी थियो । खर्च पनि कम लाग्ने भयो । त्यसैले आकांक्षाको टिमले यसपटक 'फोर्थ वाल ब्रेक' गर्ने नाटकमा तयारी सुरु गर्‍यो । 'फोर्थ वाल ब्रेक' अन्तरक्रियात्मक नाटक हो । जसमा मञ्च र दर्शक छुट्टिएका हुँदैनन् । उनीहरु पनि नाटकमा सहभागी हुन्छन्, कुनै न कुनै रुपमा ।
सोलो प्रस्तुतिमार्फत 'फोर्थ वाल ब्रेक' गर्न चुनौती छ । सुदाम सुनाउँछन्,'फोर्थ वाल ब्रेक गर्ने भनेर दर्शकलाई हेरेर कुरा गर्ने होइन कि उनीहरुलाई स्टेजमै ल्याएर गफ गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो पात्रले कुन ठाउँमा कुराकानी गरेको छ त्यो अलि खुलेको छैन । चुनौती नै छ ।' हुन त सुदाम यस पटक मात्रै सोलो प्रस्तुति दिँदै छैनन् । सन् २०१७ मा 'म्याड म्यान्स डायरी'मा पनि एक्लै मञ्चमा देखिएका थिए उनी । सुदाम अभिनयको प्रकृयामा डुब्दै त्यसको मज्जा लिँदै अभिनय गर्न रुचाउँछन् । तर यो नाटक उनले पछ्याइरहेको भन्दा नौलो छ । त्यसैले उनी उत्साहित छन्, सँगसँगै डर पनि छ ।
'यो नाटकमा आफूलाई खोज्न गाह्रो भएको छ । यसमा कथा भनिरहेको छ पात्रले । मैले मेरो कथा भने जस्तो हो । तर नयाँ कुरा त दर्शकलाई ल्याएर अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । यसरी कुराकानी गरेरै एक घण्टा बिताउँदा त त्यसलाई कसरी पर्फमेटिभ बनाउने भन्ने छ । यसमा अरु अभिनय गर्न सक्दिन । दर्शकलाई हेरेर नै कुरा गर्नुपर्छ, फेरि त्यो नाटक हो कि भन्ने भान पनि गराउन भएन,' रिहर्सल सकेर गफिन थालेका सुदामले भने, 'नाटकभरी दर्शकले त कलाकारको भावना हाउभाउ पनि हेर्न खोज्छन् नि त । यहाँनिर के गर्ने ? भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ । के भएर यो पात्रले आफ्नो कथा सुनाउँदैछ भन्ने हुन्छ । कथा भन्दै गर्दा उसले कस्तो अनुभव गरिरहेको होला, दुवैलाई मिलाएर जानुपर्‍यो ।'
सुदामलाई यो नाटक नेपाली समाजसँग सम्बन्धित छ जस्तै लाग्छ । 'आत्महत्याको प्रयास भयो भने त्यो कुरालाई हामी समाजमा भन्न डराउँछौं । हाम्रो समाजसँग नाटक मिल्दो छ । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नै नचाहने, बुझ्ने/नबुझ्नेले सबैले यो नाटक हेर्नुपर्छ । अहिले सबै आशा विहिन, फ्रस्टेट, डिप्रेस छन् । यस्तो अवस्थालाई कसरी लिने, सोच्ने भन्ने कुरा नाटकमा समावेश छ,' सुदामले सुनाए ।
'रियलिज्म'मा आधारित नाटक गर्न रुचाउने हुँदा सुदामले 'हरेक बबाल कुरा'मा आफूलाई फिट देखिरहेका थिएनन् । निर्देशक एवं पत्नी आकांक्षासँग उनको विवाद पनि यही विषयमा हुन्थ्यो । 'म एकछिन रोइरहेको अभिनय गर्छु भने एकछिनमै हाँसेको अभिनय गर्न सक्छु । तर सुदाम 'मलाई समय लाग्छ भनिरहन्छ' । काम गर्दा पनि हामी दुईको यही विषयमा विवाद भइरहन्छ,' सुदामको छेउमै बसेकी आकांक्षाले हाँस्दै सुनाइन्, 'मलाई कति ठाउँमा यो कुरा हाँसेरै बोलिदिए हुन्थ्यो सुदामले भन्ने लाग्थ्यो । तर ऊ विपरित निस्कन्थ्यो ।'
'म लजिक, कारणमा काम गरिरहेको कलाकार भएँ । यो नाटकमा के गर्ने हो, कसो गर्ने हो भन्ने कुरा पहिल्याउन नै गाह्रो भइरहेको छ,' सुदामले आकांक्षाको जवाफ भुईंमा खस्न नपाउँदै भने ।
'प्ले ब्याक थिएटर'कै कन्सेप्टमा आधारित देखिन्छ यो नाटक । आफूले गर्दै आएको कन्सेप्टसँग मेल खाएकै कारण आकांक्षाले यो नाटक रोजिन् । नाटकको रिहर्सल थाल्दाथाल्दै निषेधाज्ञा हट्यो । लामो समयपछि फेरि रंगमञ्चमा चहलपहल सुरु भएको छ । 'हरेक बबाल कुरा'को रिहर्सल हुँदै गर्दा आकांक्षालाई वर्षौंपछि थिएटर आएको अनुभव हुन थालेको छ । महामारीले नाटक बीचमै रोकिन्छ कि भन्ने डर त छँदैछ । तर नाटकको तयारी थाल्दाको उत्साह उनको टिममा छुट्टै छ ।
'कोरोनाले मानिसलाई घरबाट बाहिर निस्कन, चियाभेट गर्न हत्तपत्त जोश दिँदैन । एक्लै बस्न मन लाग्ने, घरभित्रै बस्न मन लाग्ने बानी विकास गरेको छ । अहिले विस्तारै स्टेजमा आउँदा अलिअलि कोरोनाको समय बिर्सेको हो कि भन्ने भइरहेको छ । लगभग २ वर्ष नै भयो,' आकांक्षा सुनाउँछिन्, 'कहिलेकाहीँ डर लाग्छ । झल्याँस्स हुन्छु, नाटक तयारी गर्दैछौं भोली रोकिएला, महामारी बढ्यो भने के गर्ने होला ? भन्नेमा अन्योल छ ।'
महामारीअघि कौसीमा दर्शकको जमघट भइरहन्थ्यो । कोही छतमा गएर चिया पिउँथे, कोही बार्दलीमा । त्यो कुरा निकै 'मिस' गरिरहेकी थिइन् आकांक्षा । उनी यो नाटकले ती दिन फर्काउनेमा आशावादी छिन् । 'दर्शकको जमघट एकदमै मिस भइरहेको थियो । अहिले त परिक्षण मात्र गर्न खोजेको हो ‍। यो नाटकले कत्तिको साथ पाउँछ हेरौं, त्यसपछि एनिमल फार्म गर्छौं । थिएटरमा थिएटरकै मानिस आउँछन् । यो नाटक हेर्न अन्य पनि आएको हेर्न मन छ,' आकांक्षाले सुनाइन् ।
महामारीबीच नै शिल्पीमा नाटक मञ्चन भयो । मञ्चमा फर्किन त्यसले पनि हौसला दिएको सुदाम बताउँछन् । 'सायद दर्शकले नाटकलाई मिस गरेका छन् । हामी आफैंलाई नाटक हेर्न जान रहर छ । त्यो पूरा पनि हुन्छ हाम्रो नाटकले,' उनले सुनाए।
कौसी थिएटरको टिम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नाटक मञ्चन गर्ने तयारीमा छन् । ३० जना दर्शकबीच नाटक देखाइने बताइएको छ । 'दर्शकको सक्रिय सहभागितामा पात्रले गर्ने जीवनयात्राको सजीव संग्राहलय हो हरेक बबाल कुरा,' आकांक्षा सुनाउँछिन्, 'धेरै नाटकको चर्चा भयो यसबीच । अन्तिममा डंकनको नाटक पढेपछि मनपर्‍यो । कलाकार पनि एकजना मात्र । रुपान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भयो । छोटो समयको लागि यो आँट्न सक्ने भयो ।'
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ ११:१५
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई ७० अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन